Zvese nezveGPS nemidziyo - Geofumadas
All pamusoro GPS uye midziyo
Iri peji ipfupiso yakaoma yemisoro inosanganisirwa saiti ino nezve GPS neMidziyo. Icho hachina zvinyorwa zvitsva.
GPS Mobile Mapper, Promark nevamwe
Manual of MobileMapper uye Promark muchiSpanish
Mobile Mapper 10, kutanga kuonekwa
A kutarisa 100 Mobile Mapper
Kuedzwa kweZvinyorwa3 ... mifananidzo chete
The GPS Promark 3, kuororwa
GPS Mobile Mapper 6, Data kubatwa
Google Maps kubva Mobile Mapper 6
MobileMapper 6, kutanga kuonekwa
60 Kuenzanisa Chart Total Stations
Gadzira Curves ne Civil CAD kubva ku Total Station Data
Nzira yekudhiropa uye nzvimbo yese
Manuals yekushandiswa kwe GPS uye nzvimbo yese yeLeica
Tinotora nzvimbo yekurobhoti yechipatara here?
Kuongorora Total Station Sokkia SET 630RK
Kutengesa kunotenga Ashtech; chii chatingatarisira
Kuparidzirwa kwevakuru veGeo
Dhina kushandiswa neCAD / SIG software
GPS Babel, yakanakisisa kushanda deta
Zvishandiso uye maitiro
Municipal Cadastre, iyo nzira inofanirwa
Dhonza paIndaneti paGoogle Maps
Ruramisa dheti kubva pane imwe nyanzvi yekuongorora
Kuwedzerwa kwekubata kwekuongorora zviyero
GPS mune zvigadzirwa zvemafoni
XPERIA Mini X10, wokutanga kusangana Android
GPS iyo yakakura yekiyiki uye foni dzose dzenyika
Kuisa gvSIG Mobile
GPS maps of Venezuela, Peru, Colombia uye Central America
Gaia GPS, kutora GPS, Ipad nemigwagwa yefaira
Mamwe magwaro anotaura nezve GPS nemichina
3 magazini, 10 geofumadas matsva eAugust
Geoinformatics 6, yakawanda yevanotsvakurudza
Nhau imwe chete, ikozvino ine GPS
13 Inopindura "Zvese nezveGPS nemidziyo"
Ndinonzwisisa ako ezvinhu, kana kwakaita nzvimbo yacho haina kuenzana chaizvo zvinoitika izvi kusagadzikana, imi munoti chinhu rectangle uye Isa makori nechimwe vertex, tinofanira kutarisa imwe nomunzvimbo dzine zvinhu kupa pfungwa, asi ndichapa pfungwa dzangu maonero kuona kana chinhu kunobatsira, mumwe makori chepamusoro panzvimbo uye maonero ari pakati angave zvakakwana, kubvira 20? km riri chinhambwe kuti midziyo GNSS uye wedzera repeaters sokuronga kunzvimbo dzokumusorosoro achiedza kuvhara nzvimbo uko pasina kuvhara. Kushandisa chii uchitova, zvingava zvakanaka kuziva kana mukana pamwe Mobile Internet nenhoroondo mune dzimwe nzvimbo, zvichida unogona kushandisa NTRIP + Radio mubatanidzwa. Chero chii chandinosiya ma mail, info@acnovo.com
vane anofungidzirwa nzvimbo 30000 hectares wezvamatongerwe rectangle pakati 20000 M 15000 M pa divi, panguva vertices vane ERP NET R9 Trimble (ERP, Permanent Tracking Station) uye rinoreva 1 ERP, dzomunyika kwakaita nzvimbo yacho iri rectangle haina kuenzana (zvakakwana zvikomo), ichi inoita GPS kushanda pamwe gororo RTK Trimble R10 chiratidzo wakarasika, zvinonzi akafunga kuisa GPS chiratidzo repeater redhiyo. iyo mhinduro ndiyo inonyanya kushamwaridzana kuitira kukwanisa kuongororwa muRTK, kushamwaridzana kwemavhidhiyo mune zvakatevedzana kana zvakafanana.
Jose Salas inoti:
Svondo, 2017 pa
Hi! Ndakaedza kuisa mufananidzo we georeferenced muTropcon GR5 GPS collector uye handigone kuzviona. Chii chandinofanira kuita?
Sawa munhu wose, ndine gps ashtech 120 Ndakanga ndakatarisana nekiratiro chetara pakutanga pane imwe nzira yokugadzirisa zvakare kana kuigadzirisa
Hi guys Ndinodikanwa kuziva kuti ndinogona sei kana imwe sarudzo yedambudziko duku iri guru.
Ndine GPSMAP 62 SC. Ndakaita ongororo nezvikwangwani nemapikicha emamwe mabhiriji nejanji njanji uye zvino handikwanise kutora mafoto kana chero chinhu, ndingaite sei kana chirongwa chipi kuti ndishandise ichi, mapikicha ane anorongeka zvakare haabudi kuzogona kuitora kuGoogle eart kana iri ndinogona here kutarisira kuti mandibatsira ndatenda zvikuru.
Cesare Dantonio inoti:
Svondo, 2013 pa
pane mutemo wemumwe munhu anotaura kuti mafaira .sp3 (precise esfemeris) anogona kuendeswa kuRinex kuburikidza neBERNESE software. MUBVUNZO WAKO UNOGONA? uye kana zvichikwanisika kubva kwandinovhima software. Ndapinda peji peji ichi ndicho chibvumirano:
http://www.bernese.unibe.ch/ asi ini handina kuwana installer. Mumwe munhu angandibatsira kuti ndijekese kana izvi zvichikwanisika kana kwete.- KUTA ANTE HANDO KUNYANIRA KUVANHU.
Guillermo Correa Arias inoti:
Vaigona kunditumira catalago.
Sao Diego, ini handizivi zvakakwana EPOCH kukupa mazano.
Fausto, tarisa zuva rekomputa yako uye komputa yako. Ini handifanire kukupa matambudziko. Ndeipi software software yauri kushandisa?
Fausto Girls inoti:
Ndinoda kuziva zviri kuitika chete Software MSTAR potsproceso Magellan Promark X kufambidzana uye vasingagoni kuiita basa zvinondipa kukanganisa mu yemichindwe almanac uyo pari kushandisa software iyi kuitira kuti ndaigona kutsanangura zviri kuitika vanoda rubatsiro.
Diego Rivera inoti:
Ndinoda kuva nemafungiro pamusoro peGPS L1 EPOCH 10 yekuongororwa kwemashoko ekunyatsorurama uye kuenzanisa kwayo ne Mobile Mapper 10. Ndinokutendai
Iwo zvikwata zvakanaka kwazvo, pamwe nekusagadzikana kwaunogara uchiwana rutsigiro kana iwe uchinge wakuvara. Zvinoenderana neguta raunogara, asi kazhinji muLatin America vane chinzvimbo chakaderera maererano neSokkia, Leica neTopcon
Mhoro mudiwa, ini ndinobva kuArgentina uye ndanga ndichida kuziva kuti ndeipi pfungwa iyo mabwe uye maodzanyemba mabrands akakodzerwa nezviteshi zvese Pano ivo havanyatso kuzivikanwa, saka ini ndoda kuziva, kana ivo vakavaedza ivo, ndeapi mhedzisiro akavapa iwo ... zvinonakidza kuve nemafungiro emumwe munhu atova neruzivo rwekushanda nemhando idzi.
Dzidza GIS uchishandisa zvirongwa zvese zviri zviviri, neyako imwecheteyo data model Yambiro Iyo QGIS kosi yakagadzirwa pakutanga muchiSpanish, ...